हिमाल खबरपत्रिका | नयाँ मोडलमा स्विफ्ट
नयाँ मोडलमा स्विफ्ट
नेपालका लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी मोटोकर्पले स्विफ्टको नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ स्विफ्टमा सिंगल अपर्चर फ्रन्ट ग्रील, एलईडी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, कट–टू–टोन अलोय व्हील तथा अर्बन स्याटिन क्रोमयुक्त इन्टेरियर लगायतका विशेषता छन् ।
यसमा १.२ लिटर भीभीटी, डुअल एयर ब्याग, ईबीड, एबीएस, आइसोफिक्स् र टोटल इफेक्टिभ कन्ट्रोल टेक्नोलोजी जस्ता सुविधा छन् । आकर्षक डिजाइन, उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स र फिचरका कारण नयाँ स्विफ्ट सबैको रोजाइमा पर्ने सीजी मोटोकर्पको विश्वास छ । २२ किलोमिटर प्रतिलिटर माइलेज दिने नयाँ स्विफ्टको मूल्य रु.२८ लाख ९९ हजार तोकिएको छ ।
म्याक लुब्रिकेन्ट्स नयाँ प्याकमा
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले म्याक लुब्रिकेन्ट्सको नयाँ प्याक सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ प्याकमा टेम्पर ईभिडेन्ट क्याप, दुई वटा ह्याण्डल ग्रिप लगायतका नयाँ विशेषता थपिएको सिप्रदीले जनाएको छ । यसको नेकमा ग्रिप राखिएको कारण खन्याउँदा आवाज नआउने र नपोखिने कम्पनीको दाबी छ । रातो रंगको नयाँ प्याक पेट्रोल इन्जिनको लागि, गोल्ड प्याक प्रिमियम सेग्मेन्टको पेट्रोल र डिजल इन्जिनको लागि तयार पारिएको छ ।
सुधारिएको प्याक साथै ढुवानी र भण्डारणका लागि सहज भएकोले यो ग्राहकको रोजाइमा पर्ने कम्पनीले दाबी गरेको छ । नेपालमा टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता रहेको सिप्रदी ट्रेडिङले म्याक लुब्रिकेन्ट्सको पनि बिक्री गर्दै आएको छ ।
यूरोग्रिप टायर नेपालमा
सवारी साधन उत्पादक बजाज को नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा. लि.ले यूरोग्रिप टायर नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
बजाज ले आफ्ना सवारीको ‘ओरिजिनल फिटमेन्ट’ मै यूरोग्रिप टायर प्रयोग गर्दै आएको छ । ‘एक्स्ट्रा ड्यूरेबल’ भनिएको यूरोग्रिप अन्य टायरको तुलनामा लामो अवधिसम्म टिक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
युरोग्रिप टायर मुलुकभरका बजाज का डिलर र आधिकारिक सर्भिस सेन्टर साथै मल्टी ब्राण्ड सेन्टरहरूमा पनि पाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट ब्यांक लिमिटेडले सल्यानको लान्तीमा ७२औं शाखा विस्तार गरेको छ । ब्यांकले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई सहज ब्यांकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले वित्तीय सञ्जाल नपुगेका क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएको जनाएको छ । ब्यांकले विपन्न वर्ग कर्जातर्फ २२ हजार ७०० व्यक्तिमा रु.३ अर्ब ७६ करोड लगानी गरेको छ । आठ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको ब्यांकको १०० वटा एटीएम र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर रहेका छन् ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले रु.१०० दरका ६० लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशनको लागि सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । थप शेयर निष्काशन पश्चात आईएमई लाइफको चुक्ता पूँजी रु.१ अर्ब ४० करोडबाट बढेर रु.२ अर्ब कायम हुनेछ । भदौ २०७४ देखि कारोबार शुरु गरेको कम्पनीले मुलुकभर ५० शाखा तथा उप–शाखा मार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
एभरेष्ट ब्यांकले काठमाडौंको सीतापाइलामा नयाँ शाखा शुरु गरेको छ । सीतापाइला शाखाको उद्घाटन ब्यांकमा संयुक्त लगानी रहेको भारतको पंजाब नेशनल ब्यांकका कार्यकारी निर्देशक एल.भी. प्रभाकरले गरेका हुन् । ब्यांकले ८० शाखा, ७ एक्सटेन्सन काउन्टर, २८ राजस्व संकलन काउन्टर र ११३ एटीएम मार्फत ९ लाख ५० हजार बढी ग्राहकलाई सेवा दिंदै आएको जनाएको छ ।
सिभिल ब्यांक लिमिटेड छक्का पञ्जा–३ चलचित्रसँग आवद्ध भएको छ । आवद्धताको सम्झौतापत्रमा सिभिल ब्यांकका चिफ बिजनेस अफिसर सुजितकुमार शाक्य र छक्का पञ्जा–३ की निर्देशक दीपाश्री निरौलाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
‘समृद्धिको लागि सिभिल ब्यांक’ भन्ने नारा राखेको ब्यांकले वित्तीय साक्षरताका लागि चलचित्र उपयुक्त माध्यम भएको बताएको छ । चलचित्रको माध्यमबाट वित्तीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्दा ब्यांक र चलचित्र दुवैलाई फाइदा हुने ब्यांकले जनाएको छ ।